Vaovao - singa roa lehibe amin'ny tsipika famokarana tsy tenona spunbond
Amin'izao fotoana izao, ny fampiasana lamba tsy misy tenona mifamatotra mifatotra dia mbola mahazatra ihany. Ho fanampin'ireo akanjo fanaontsika matetika, dia takiana amin'ny saron-tava malaza ihany koa ireo lamba tsy voatenona namboarina. Ny tsena goavambe ho an'ny lamba tsy tenona spunbond dia manome ny tsipika famokarana lamba tsy tenona spunbond amin'izao fotoana izao. Aorian'ny fampiasana ny tsipika famokarana lamba tsy tenona spunbond toy ny fitaovana famokarana mandeha ho azy haingam-pandeha dia afaka mamokatra be dia be ny olona. Lamba maro tsy vita tenona spunbond no vita hamaly ny filan'ny tsena. Ny tsipika famokarana lamba tsy tenona spunbond dia fitaovana fanodinana mekanika tena sarotra nefa manan-tsaina. Etsy ambany, ny mpampanonta dia hampiseho aminao ireo singa lehibe roa amin'ny tsipika famokarana tsy vita amin'ny spunbond amin'ny antsipiriany.
Rafitra fandefasana: Ny voalohany dia ny rafitra fandefasana ny tsipika famokarana tsy tenona spunbond. Ny rafitry ny fandefasana dia misy lafin-javatra roa, ny zoro fampitana anatiny sy ny faritra mifandraika amin'izany, ary ny fehikibo fampitana ivelany. Ny fehin-kibo fampitana avy any ivelany dia matetika misy fitaovana famahanana, fitaovana fampitana ary fitaovana fitahirizana. Ny fitaovana tsirairay dia mifanaraka amin'ny fizotran'ny famokarana lamba tsy tenona spunbond. Ny masinina iray manontolo dia tarihin'ny hazo goavambe anaty, ary avy eo afaka hahatratra ny vokatra azo avy amin'ny fikarakarana fitaovana avo lenta tokoa.
Rafitra fanaraha-maso: Araka ny anarany, ny rafitra fanaraha-maso dia rafitra iray mifehy ny fiasan'ny tsipika famokarana tsy milamina spunbond. Ny reducer ao anatin'ny tsipika famokarana tsy tenona spunbond dia mamadika ny signal elektrika ho hetsika mekanika, ary avy eo manohana ny fiasan'ny singa fampitana mekanika iray manontolo amin'ny tsipika famokarana tsy vita amin'ny spunbonded. Mandritra izany fotoana izany, ny tsipika famokarana tsy vita amin'ny spunbond dia manana koa fiovan'ny maody fanaraha-maso marobe, ohatra, azo ahitsy eo anelanelan'ny mandeha ho azy, semi-mandeha ho azy sy ny boky torolàlana, mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny tsipika famokarana tsy vita amin'ny spunbonded eo ambanin'ny filan'ny famokarana samihafa.
Ireo singa roa lehibe etsy ambony dia mamorona tsipika famokarana lamba tsy vita amina spunbond, izay manome antoka matanjaka sy azo antoka ho an'ny famokarana lamba tsy tenona spunbond. Miaraka amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny teknolojia famokarana, maro ny tsipika famokarana tsy tenona efa manomboka mampihena ny vidiny ary lasa malaza, ary mpanamboatra maro no nanomboka nampiditra azy ireo. Ny fitaovana rehetra natolotry ny mpanamboatra tsipika fanodinam-bidy tsy misy tenona dia misy atiny teknika avo lenta, vidiny siantifika ary kalitao tena tsara, izay hahazoana antoka fa ho afa-po amin'ny fampiasanao ianao. Raha liana amin'ny fitaovantsika ianao dia aza misalasala mitsidika ny orinasa.
Tags mafana, Vokatra mafana, Sitemap Teny lakile A, Teny lakile B, testkewords,